စက် operated rotary actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > စက် operated rotary actuator
စက် operated rotary actuator
AOX-မေး စီးရီး စက် operated rotary actuaသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လျှောက်လွှာများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် တူသော usages.AOX-မေး စီးရီး စက် operated rotary actuaသို့r ပေး အဆိုပါ အများဆုံး စိတ်ချရသော ဖြေရှင်းချက် သို့ satဖြစ်fy ကျွန်တော်တို့၏ တန်ဖိုးရှိသော cusသို့mers နှင့် ကျြောလှနျ expectations.AOX လိမ့်မည် ဆက်လက် သို့ တိုးတက် နောက်ထပ် အဆင့်မြင့် ထုတ်ကုန် ပေါင်းစပ် မြင့်သော နည်းပညာ နှင့် ဖြစ် အဆင်သင့် အဆိုပါ အများဆုံး စိတ်ချရသော ဖြေရှင်းချက်.
ရေနှင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သက်သေပြပေးခြင်း o-လက်စွပ်စနစ်ဖြင့် 1. မျးခံဆောက်လုပ်ရေး။
(optional ကို: ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား / Exd IIC T5, IP68) ။
AOX-မေးစီးရီးမော်တာများအတွက် 2. သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအဖုံးသော့ခလောက် rotary actuator operated
အဖုံးနှင့်အိုးအိမ်များအကြား 3. Tapered interface ကို: ဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်အိမ်ရာကနေလွယ်ကူသောရုတ်သိမ်းအဖုံးဖွင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်တင်းကျပ်သောပြင်ပကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိပါတယ်။ အမိန့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုစံဝယ်ယူအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြင်ပပေးသွင်း, လုံခြုံခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း team.It တည်ထောင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးမော်တာ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးပါမည် rotary actuator operated ။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုး, ချောထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်ထိရောက်စွာ AOX-မေးစီးရီးမော်တာ၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနိုင်ပါတယ် rotary actuator operated နှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးပါ။
A: ပုံမှန် AOX-မေးစီးရီးမော်တာကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိ rotary actuator operated ။
မေး: သင် AOX-မေးစီးရီးမော်တာ rotary actuator operated ကြောင်းသေချာစေရန်အဘယ်အရာကိုကြိုးစားအားထုတ်ပါစေပါဘူး, လက်ျာလူတစ်ဦးမှကယ်နှုတ်ကြသနည်း
hot Tags:: စက် operated rotary actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်